Fanabeazana Amin’ny Fiteny Roa Ao Guatemala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2017 2:35 GMT
(Marihina fa tamin'ny 2 Martsa 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
[Fanamarihan'ny toniandahatsoratra: nosoratan'ilay bilaogera sady mpanao gazety Juan Manuel Castillo ity lahatsoratra manaraka ity ary navoaka tao amin'ny La Nana. Renata Ávila, mpandray anjara ao Guatemalà, no nandika izany amin'ny teny Anglisy.]
Midika amin'ny teny espaniola hoe Santiaguito, na “Ilay Santiago Kely ” ny Tz'ikin Jaay. Anaran'ny sekoly iray ao Santiago Atitlán ao amin'ny fanjakan'i Guatemala ao Sololá izany. Efa nandritra ny folo taona teo ho eo izy no nampianatra ny ankizy, sy niaro ny mari-panondroana azy ireo, ny kolontsainy ary ny fahalehibeazan'ny Tzutuhiles, izay vondrom-poko ao amin'ny faritra.
Pek noq e´la utz chipaam qak´aslemal chik rara´taq xtoq k´iiya kiy laj taq achnaq nqawil.
“Zava-dehibe ny mianatra satria amin'ny alàlan'izany no ahafahanay manampy ny vondrom-piarahamonina iray manontolo amin'ny hoavy ary hampianatra ireo ankizin'ny ampitso” hoy ilay mpianatra 15 taona mianatra amin'ny fiteny roa Verónica del Carmen Damián raha naneho hevitra izy.
Taq anen xtinkiya`, kenoto´je´wachalal je´ek´ola chpaam nitnamit, chaqa´ kenyariij keno´ka jun k´omoy b´eey, jun winaq tijoneel qas ritquiin otzlaj taq naoj.
” Ny hampianatra ny ankizy mahantra sy hanampy ny olona no tanjoko,” hoy ilay ankizivavy 12 taona Ana Maria Mendoza.
Ny hazo maitso, ny zaridaina tsara tarehy sy ny lalana, ny Farihin'i Atitlán mahavariana, ary ny toerana voatokana ho an'ny afondasy dia ohatra vitsivitsy ihany amin'ny zavatra izay atolotry ny sekoly.
“Tiako ny sekoliko satria misy zaridaina sy voninkazo ao”, hoy i Pedro Mendoza Reanda, izay mirehareha amin'ny fananana sekoly mahafinaritra toy izany. Tahaka izany ihany koa, ankizy maromaro hafa no mahita an'i Tz`ikin Jaay, ho toy ny toerana fialamboly.
Ao an-tanàndehiben'i Guatemalà, mianatra any anatin'ireo tranobe tsy misy toerana hilalaovana ny ankizy, ao anaty trano kizokizo. Manana fandaharanasa ekolojika, rafitra fanavaozana ny sekoly mampiasa fiteny roa ao Santiago ary mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny tontolo iainana voalanjalanja sy ny fanajana ny natiora ireo mpampianatra. Raha takiana ho an'ny mpianatra ny fanaovana fanamiana rehefa mianatra any an-tanàndehiben'i Guatemalà , ny ao Santiaguito kosa dia tsy voatery hanaovana ny fanamiana lobaka mena sy pataloha fotsy.
Nanokatra ny varavarany ho an'ireo ankizy rehetra tao an-tanànakely izay naniry ny hianatra tamin'ny taona 1997 ny Tz'ikin Jaay. Mifantoka amin'ny lesona nentim-paharazana sy ny lesona teknika ary ny asatanana ihany koa ny fandaharam-pianarana. Tsy tonga hatrany amin'ny kilasy ambaratonga faharoa ny ankamaroan'ireo mpianatra ary ny hanome azy ireo ny fitaovana ho an'ny hoaviny no iray amin'ireo tanjon'ny sekoly noho izany. Mampiroborobo ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ny fahasamihafan'ny fiteny miaraka amin'ny lesona amin'ny teny Tzutuhil, Espaniôla, ary Anglisy ny sekoly, miaraka amin'ny fanampian'ireo mpilatsaka an-tsitrapo tahaka an'i Kirstin Maria Jones.
Daty iray fahatsiarovana ny 5 Oktobra 2005 ho an'ireo mpianatra, mpampianatra ary ray aman-dreny ao amin'ny sekoly. Ravan'ny rivodoza Stan ny zava-drehetra tamin'izany. Tondraky ny fotaka ny sekoly, rava ny fotodrafitrasa. Ny vondrom-piarahamonina ihany no nanorina indray ny sekoly satria tsy nahazo fanohanana na fanampiana avy amin'ny governemanta mihitsy ry zareo .
Tsy mahazaka tena ny sekoly. Tsy ny ray aman-dreny rehetra no afaka mandoa vola isam-bolana. Tsy vonona ny hamatsy vola ny tetikasa tsy ortodoksa toy izany ny Minisiteran'ny Fanabeazana. Koa satria tsy miankina ny sekoly, kanefa misokatra ho an'ny olon-drehetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina, dia tsy afaka mahazo famatsiam-bola federaly izy. Tsy vonona ny handray anjara amin'ny fandaharanasa hafa izy ireo satria mifantoka amin'ny famenoana ny loharanom-bola ny fepetra takian'izy ireo, tsy afaka manatrika ny fandaharam-pianarana fanampiny toy ny taranja Anglisy sy ny kilasy hianarana zavakanto ny ankizy noho izany. Mahazo fanohanana avy amin'ny ONG miisa roa izy ireo amin'izao fotoana izao, saingy tsy mbola azo antoka ny hoaviny.
Raha mahaliana anao ny fitsidihana ny sekoly sy/na ny vondrom-piarahamonina dia azonao atao ny manoratra any amin'ny gasparreanda[At]yahoo[dot]com na mamela fanehoan-kevitra ato amin'ity lahatsoratra [teny anglisy] ity.